Mi account နှင့်ပတ်သက်သမျှ မှတ်သားဖွယ်လေ့လာဖွယ်ရာများ « XMS-MMF
Mi account နှင့်ပတ်သက်သမျှ မှတ်သားဖွယ်လေ့လာဖွယ်ရာများ
!!! Mi Account !!!********************Xiaomi ဖုန်းချစ်သူများအတွက် အရေးပါသောအရာတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရတဲ့ Mi Account ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ သုံးလို့ကောင်းတဲ့ Feature တွေ အကြောင်းကို အနည်းငယ်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
‪#‎Mi‬ Account ကိုဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ ?
Mi Account ရှိမှသာ Theme app ကနေ မြန်မာစာကို Download ရယူပြီး မြန်မာစာကို ရယူနိုင်တာက အကောင်းဆုံး အားသာချက်တစ်ခု ဖြစ်နေမှာပါ။ Theme - Customize - fonts မှာ Zawgyi လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ရုံဖြင့် မြန်မာစာ ကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက် မြန်မာစာကို အဆင်ပြေဆုံး အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ တကယ်တန်းသုံးမယ်ဆိုရင် Font ရှာရုံတင် မဟုတ်ပဲ နှစ်သက်ရာ Theme မျိုးစုံနဲ့ မိမိဖုန်းကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ဦးမှာပါ။
နောက်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ Mi Cloud ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Mi Cloud ဆိုတာ ဘာလဲဆိုရင် Xiaomi ကနေ ဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်းကို Storage 5GB Free ပေးထားတာလို့ပဲ အလွယ်ပြောရမှာပါ။ Local Storage မဟုတ်ပဲ Online Storage တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ Contacts, Messages, Gallery, Call Log, Notes, Wifi Setting, Recordings တွေကို စိတ်ချလက်ချ Backup လုပ်ထားနိုင်မှာပါ။ Mi Cloud မှာ Backup ယူထားတယ် ဆိုရင် နောင် ဖုန်းပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်း Reset ချမိတာပဲဖြစ်ဖြစ် Mi Account Sign in ပြန်ဝင်ပြီး Mi Cloud ထဲမှ Data တွေကို Restore ပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့ သုံးလက်စအတိုင်း ပြန်ပြီး ရရှိနိုင်မှာပါ။
Mi Cloud ထဲမှာမှ အသုံးဝင်တဲ့ Feature နောက်တစ်ခုကတော့ Find Device Feature ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Find Device လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ဒါဟာ ဖုန်းပျောက်ရင် ပြန်လည်ရှာဖွေတဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ခန့်မှန်းမိကြမှာပါ။ တကယ်လို့ ဖုန်းပျောက်သွားခဲ့ရင် ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး https://i.mi.com/ ကနေတစ်ဆင့် Mi Account ကို Sign in ဝင်ရောက်ပြီး ရှာဖွေနိုင်မှာပါ။ Mi Cloud မှာ Backup ရယူထားတဲ့ Data တွေကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်သလို Find Device Feature တွင်လည်း ဖုန်းကို Lock ချခြင်း၊ Alarm မြည်စေခြင်း၊ Data များကို ဖျက်ပစ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။
( Find Device Feature ကို တကယ်ဖုန်းပျောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ မစမ်းသပ်ဖို့ သတိပေးပါရစေ။ ဖုန်းကို Lock ချလိုက်ရင် Mi Account password ဖြင့်သာ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး Internet ချိတ်ဆက်ရန် အခက်အခဲ (သို့) Mi Account password မေ့နေပါက ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအပြင် နောက်ပိုင်း Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ Security ပိုင်း မြင့်မားလာပြီး Mi Acoout Lock ကျပါက ပြန်လည်ဖြေနိုင်တဲ့ Service နည်းပါးလာတဲ့အတွက် Mi Account ID နဲ့ Password ကတော့ မဖြစ်မနေ မှတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ )
#Mi Account တစ်ခုကို ဘယ်လိုပြုလုပ်ကြမလဲ ?
Mi Account တစ်ခုကို ပြုလုပ်တော့မယ် ဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ Mi Account app ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Setting - Mi Account ကပဲဖြစ်ဖြစ် Create Mi Account ကနေ အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ နည်း ၂ မျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Sim card ဖြင့် (သို့) Email/Gmail ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ Sim card နဲ့ ပြုလုပ်တာကတော့ များသောအားဖြင့် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး တခါတလေ Telecom Operator ပေါ်မှုတည်ပြီးလည်း ကြာနိုင်ပါတယ်။Gmail ဖြင့် ဖွင့်မယ်ဆိုရင် အောက်ပါ Link ကနေ ပြုလုပ်တာက ပိုမိုမြန်ဆန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် Account တစ်ခု ဖွင့်တဲ့အတိုင်း လိုအပ်တဲ့ Field တွေကို ဖြည့်သွားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Gmail Inbox ထဲကို ပို့လာတဲ့ Verification code ကို ဖြည့်လိုက်တာနဲ့ Mi Account ဖွင့်လှစ်ခြင်း ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
‪#‎မှတ်ချက်‬ ။ Mi Account တစ်ခုအသုံးပြုနေပြီဆိုရင် ထို Account ကို Device 10 ခုအထိ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းတစ်လုံး Account တစ်ခု ထားစရာ မလိုအပ်ပါဘူး။ ထပ်မံ သတိထားစေချင်တာကတော့ Mi Account ရဲ့ ID No. နဲ့ Password ကိုသေချာမှတ်ထားပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။*********************************************************************************** Unicode Version *
!!! Mi Account !!!*********************Xiaomi ဖုနျးခဈြသူမြားအတှကျ အရေးပါသောအရာတဈခုလို့ ပွောလို့ရတဲ့ Mi Account ရဲ့ အသုံးဝငျပုံ သုံးလို့ကောငျးတဲ့ Feature တှေ အကွောငျးကို အနညျးငယျပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
#Mi Account ကိုဘာကွောငျ့လိုအပျတာလဲ ?
Mi Account ရှိမှသာ Theme app ကနေ မွနျမာစာကို Download ရယူပွီး မွနျမာစာကို ရယူနိုငျတာက အကောငျးဆုံး အားသာခကျြတဈခု ဖွဈနမှောပါ။ Theme - Customize - fonts မှာ Zawgyi လို့ ရိုကျရှာလိုကျရုံဖွငျ့ မွနျမာစာ ကိုရရှိနိုငျတဲ့အတှကျ မွနျမာစာကို အဆငျပွဆေုံး အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။ တကယျတနျးသုံးမယျဆိုရငျ Font ရှာရုံတငျ မဟုတျပဲ နှဈသကျရာ Theme မြိုးစုံနဲ့ မိမိဖုနျးကို ပွောငျးလဲပွငျဆငျနိုငျဦးမှာပါ။
နောကျအားသာခကျြတဈခုကတော့ Mi Cloud ပါဝငျတာဖွဈပါတယျ။ Mi Cloud ဆိုတာ ဘာလဲဆိုရငျ Xiaomi ကနေ ဖုနျးအသုံးပွုသူတိုငျးကို Storage 5GB Free ပေးထားတာလို့ပဲ အလှယျပွောရမှာပါ။ Local Storage မဟုတျပဲ Online Storage တဈခုဖွဈတဲ့အတှကျ မိမိရဲ့ Contacts, Messages, Gallery, Call Log, Notes, Wifi Setting, Recordings တှကေို စိတျခလြကျခြ Backup လုပျထားနိုငျမှာပါ။ Mi Cloud မှာ Backup ယူထားတယျ ဆိုရငျ နောငျ ဖုနျးပွောငျးတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ဖုနျး Reset ခမြိတာပဲဖွဈဖွဈ Mi Account Sign in ပွနျဝငျပွီး Mi Cloud ထဲမှ Data တှကေို Restore ပွုလုပျလိုကျတာနဲ့ သုံးလကျစအတိုငျး ပွနျပွီး ရရှိနိုငျမှာပါ။
Mi Cloud ထဲမှာမှ အသုံးဝငျတဲ့ Feature နောကျတဈခုကတော့ Find Device Feature ပဲဖွဈပါတယျ။ Find Device လို့ပွောလိုကျတာနဲ့ ဒါဟာ ဖုနျးပြောကျရငျ ပွနျလညျရှာဖှတေဲ့ Feature တဈခုဖွဈတယျဆိုတာကိုတော့ ခနျ့မှနျးမိကွမှာပါ။ တကယျလို့ ဖုနျးပြောကျသှားခဲ့ရငျ ပွနျလညျရှာဖှနေိုငျမှာဖွဈပွီး https://i.mi.com/ ကနတေဈဆငျ့ Mi Account ကို Sign in ဝငျရောကျပွီး ရှာဖှနေိုငျမှာပါ။ Mi Cloud မှာ Backup ရယူထားတဲ့ Data တှကေို ရယူနိုငျမှာဖွဈသလို Find Device Feature တှငျလညျး ဖုနျးကို Lock ခခြွငျး၊ Alarm မွညျစခွေငျး၊ Data မြားကို ဖကျြပဈခွငျးမြားကို ပွုလုပျနိုငျမှာပါ။
( Find Device Feature ကို တကယျဖုနျးပြောကျတာမြိုးမဟုတျပဲနဲ့တော့ မစမျးသပျဖို့ သတိပေးပါရစေ။ ဖုနျးကို Lock ခလြိုကျရငျ Mi Account password ဖွငျ့သာ ပွနျလညျဝငျရောကျရမှာဖွဈပွီး Internet ခြိတျဆကျရနျ အခကျအခဲ (သို့) Mi Account password မနေ့ပေါက ပွနျလညျအသုံးပွုလို့ ရမှာမဟုတျပါဘူး။ အဲ့ဒီအပွငျ နောကျပိုငျး Xiaomi ဖုနျးတှမှော Security ပိုငျး မွငျ့မားလာပွီး Mi Acoout Lock ကပြါက ပွနျလညျဖွနေိုငျတဲ့ Service နညျးပါးလာတဲ့အတှကျ Mi Account ID နဲ့ Password ကတော့ မဖွဈမနေ မှတျထားဖို့ လိုအပျပါလိမျ့မယျ။ )
#Mi Account တဈခုကို ဘယျလိုပွုလုပျကွမလဲ ?
Mi Account တဈခုကို ပွုလုပျတော့မယျ ဆိုရငျ ဖုနျးရဲ့ Mi Account app ကနပေဲဖွဈဖွဈ၊ Setting - Mi Account ကပဲဖွဈဖွဈ Create Mi Account ကနေ အလှယျတကူပွုလုပျလို့ရပါတယျ။ နညျး ၂ မြိုးဖွငျ့ ပွုလုပျနိုငျပွီး Sim card ဖွငျ့ (သို့) Email/Gmail ဖွငျ့ ပွုလုပျနိုငျမှာပါ။ Sim card နဲ့ ပွုလုပျတာကတော့ မြားသောအားဖွငျ့ ပိုမိုမွနျဆနျပွီး တခါတလေ Telecom Operator ပျေါမှုတညျပွီးလညျး ကွာနိုငျပါတယျ။Gmail ဖွငျ့ ဖှငျ့မယျဆိုရငျ အောကျပါ Link ကနေ ပွုလုပျတာက ပိုမိုမွနျဆနျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျ Account တဈခု ဖှငျ့တဲ့အတိုငျး လိုအပျတဲ့ Field တှကေို ဖွညျ့သှားပွီး ကိုယျ့ရဲ့ Gmail Inbox ထဲကို ပို့လာတဲ့ Verification code ကို ဖွညျ့လိုကျတာနဲ့ Mi Account ဖှငျ့လှဈခွငျး ပွီးဆုံးမှာဖွဈပါတယျ။
‪#‎မှတျခကျြ‬ ။ Mi Account တဈခုအသုံးပွုနပွေီဆိုရငျ ထို Account ကို Device 10 ခုအထိ အသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဖုနျးတဈလုံး Account တဈခု ထားစရာ မလိုအပျပါဘူး။ ထပျမံ သတိထားစခေငျြတာကတော့ Mi Account ရဲ့ ID No.
နဲ့ Password ကိုသခြောမှတျထားပေးဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ ခငျဗြာ။
Credit To Mi Store Yangon Share By https://web.facebook.com/xiaomimyanmarservice/